सौराहामा होटल र रेष्टुराँका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइने, के-के हुनेछन् नयाँ मापदण्डमा ? – Clickmandu
सौराहामा होटल र रेष्टुराँका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइने, के-के हुनेछन् नयाँ मापदण्डमा ?
क्लिकमान्डु २०७६ साउन १७ गते १३:३१ मा प्रकाशित
रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले नयाँ नीति निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल शुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार साढे दुई तलाभन्दा अग्लो भवन बनाउन रोकिने, प्रकृतिसँग मिल्ने एकै खालका रङ लगाउनुपर्ने, भवनहरुमा नेपाली शैली झल्कनुपर्ने, होटल रिसोर्टका लागि जमीनको न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिनेछ । सौराहामा मात्र ११० होटल र ८० रेष्टुराँ छन । सो क्षेत्रमा मानव बस्तीसमेत छ ।
क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका महासचिव राममणि खनाल स्थानीय सरकारले नीति बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन । प्रकृति सुहाउँदो रङ, वातावरणमा प्रभाव नहुने संरचना निर्माण गर्न सकेमा सौराहाको सुन्दरता अरु थपिने खनालको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले बनाउने मापदण्डमा व्यवसायी सहमत हुने भन्दै उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिनेको सौराहालाई जीवन्त राख्न यो महत्वपूर्ण काम हुने बताए । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन (रेवान) सौराहाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीले आफूहरुले चार वर्षअघि नै यसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको भन्दै नगरपालिकाले यथाशीघ्र नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सौराहामा पछिल्लो समय कङ्क्रिटका ठूला भवन बन्न थालेका छन । यस्ता कङ्क्रिटका भवनले सो क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यता लोप हुने चिन्ता व्यवसायीमा रहेको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घले सौराहाको वृहत गुरुयोजनासमेत निर्माण गरिरहेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन पर्यटनमन्त्री र वायुसेवा सञ्चालकबीच छलफल
चीनबाट धेरै पर्यटक भित्राउन पाटा नेपाल र कोट्रीबीच सम्झौता